Maxaa ugu wacan Sucuudiga iyo Iiraan xifaaltanka kharaar? - BBC News Somali
Maxaa ugu wacan Sucuudiga iyo Iiraan xifaaltanka kharaar?
Lahaanshaha sawirka Reuters/EPA
Image caption Ayatollah Ali Khamenei (bidix) iyo Amiir Maxamed bin Salman
Sucuudiga iyo Iiraan oo ah labo dal oo daris ah, misna xoog badan ayaa si weyn ugu hardamaya midkoodii ku ku gacan sarayn lahaa gobolka Bariga Dhexe.
Loolankan oo soo jirey tobonnaan sano ayaa sababta ugu weyn ay tahay wax salka ku haya diinta, taas oo ah kala duwanaanshaha mad-habka Sunniga ah iyo kan Shiiciga ah. Iiraan waxaa u badan Shiicada, Sacuudigana Suniga. Maxaa ugu wacan xifaaltanka qaraar ee Sucuudiga iyo Iiraan?
Kala duwanaanshahan u dhaxeeya labada dal waa mid sidoo kale ka jira dalalka Bariga Dhexe intooda kale, kuwa ay Shiicada ku badantahay waxa ay ku xiran yihiin Iran, halka dalalka Suniga u badanyihiina ay isu riixaan dhanka Sucuudiga.
Dowladda Sacuudiga oo eedeeyn kulul u jeedisay Iiraan
Taariikh ahaan Sucuudiga ayaa hormuud u ahaa dunida islaamka, balse markii lasoo gaaray sanadkii 1979-kii waxaa dhashay kacaankii islaamiga ahaa ee Iiraan, kaas oo xitaa ay ka go'nayd in ay faafiyaan mad-habka shiiciga ah. Wuxuuna loolan adag la galay hoggaamintii Sucuudiga.
15 kii sano ee lasoo dhaafay ayaa si gaar ah ay cirka isku shareertay xasaradda u dhaxaysa labada dal.
Duulaankii Maraykanka uu ku qaaday Ciraaq oo dal sunni ahaa ee lagu dilay Saadaam Xuseen ayaa wuxuu meesha ka saaray mid ka mid ahaa caqabaddii ugu weyneyd ee Iran hortaagnayd. Waxaa sidoo kale dhacday in saamaynta Iran ay ku faafto Ciraaq.
Markii lasoo gaaray sannadkii 2011-kii oo ay dhasheen kacdoonadii shacabka ee Carabta, ayay labadan dal ka faa'iideysteen xaalada qalalaasaha ah ee dalalkaas ka jirtay si ay u faafiyaan saamayntooda.
Xaalka ayaa aad uga daraya sababtuna waxay tahay Iiraan oo u muuqata in ay ku guuleysanayso tartanka.
Dalka Suuriya, Iiraan oo garab ka heleysa Ruushka ayaa xukuumadda Bashaar Al Asad ka caawisay in uu meesha ka saaro inta badan ciidammadii kooxaha falaagada.
Sucuudiga ayaa si naf la caarinimo ah isugu dayaya in uu uga hortago qorsheyaasha Iiraan, iyada amiirka da'da yar ee Maxamed Binu Salman uu hormuud ka yahay dadaaladaas.
Sacuudiga oo gacanta ku dhigay Askar Iiraaniyiin ah
Qadar oo cilaaqaad diblomaasi oo buuxa la yeelatay Iiraan
Dalalka sida tooska ah loogu hardamayo waxaa ka mid ah dalka Yemen oo uu ka socdo dagaal labo sano jirsaday oo u dhaxeeya xulufada uu Sucuudiga hormuudka ka yahay iyo kooxda Xuutiyiinta oo ay Iran taageerto.
Dalka Lubnaana, dad badan oo siyaasadda falanqeeya ayaa aaminsan in Sucuudiga ay ku cadaadisay Ra'isulwasaarihii dalkaas Sacad Xariiri in uu is casilo.
Sucuudiga wuxuu taageero xoog badan ka haystaa xukuumadda Trump ee Maraykanka iyo waliba Israa'iil oo la sheegay in ay Sucuudiga ku taageersantahay dadaalka in Iran wax laga qabto.
Israa'iil ayaa cabsi weyn ka qabta halista ay ku yeelan karto in maamullo Iiraan dabada ka riixayso sida Suuriya oo kale.
Markii sannadkii 2015-kii Golaha Ammaanka u codeynayeen heshiiskii hubka Nuyuukleerka , Israa'iil iyo Sucuudiga ayaa kasoo horjeedsaday.
Yaa xulafo ah?
Marka si guud loo eego qariidadda Bariga Dhexe waxaa si toos ah loo arki karaa sida la'isu xulufaysanayo suniga iyo shiicada.
Xulafada Sucuudiga waxaa ka mid ah dalalka gacanka Carabta sida Imaaraatka, Kuwait, Baxreyn, Masar iyo Urdun.
Dhanka Iran waxaa xulufo la ah dowladda Suuriya, ururka Xisbulah ee Lubnaan, dowladda Shiicada horboodayso ee Ciraaq iyo waliba kooxda Xuutiyiinta ee Yemen.
Sidee loo wajahayaa dagaalka?
Loolanka waxa uu leeyahay dhammaan astaamihii dagaalkii qaboobaa ee Maraykanka iyo Midoowga Soviet u dhaxeeyay muddo dheer.
Xisbiga rai'sul wasaarihii Lubnaan Sacad Al-Xariri oo difaacay Sacuudiga
Awood Gantaalada uu Mareykanka ka iibinayo Sacuudiga
Iran iyo Sucuudiga toos uma dagaalamayaan, balse waxa ay ku lug leeyihiin dagaalo kala duwan oo ay si dadban ugu jiraan, waxaana tusaale ah dagaalada ka socda Suuriya iyo Yemen.
Image caption Yemen ayaa ka mid ah waxyaabaha sii hurinaya xurgufta Sucuudiga iyo Iiraan
Dhawaan markii kooxda Xuutiyiinta ay gantaal ridada dheer ku tureen Sucuudiga, waxaa si weyn loogu eedeeyay Iiraan, waxaane sare usii kacay dagaalka afka ah ee labada dal.
Maadaama horumar badan ay ka gaari waayeen Yemen, Suuriyana lagu jabiyay, Sucuudiga meesha xigta ee ay isha ku hayso ayaa ah Lubnaan.
Lubnaan ayaa halis ugu jirta in ay noqoto sidii Suuriya oo kale, hase yeeshee dadka siyaasadda u dhuun duleela ayaa sheegaya in danaha Sucuudiga ay u egtahay in ay ka fulayaan Lubnaan.
Haddii Lubnaan ay wax ka dhacaan waxaa aad suurtogal u ah in Israa'iil ay soo farogaliso , waxayna keeni kartaa dagaalkii saddexaad oo dhexmara Israaiil iyo Lubnaan.
Ma laga yaabaa in uu dagaal toos ah dhexmaro Sucuudiga iyo Iiraan?
Illaa iyo hadda dagaalka Tehran iyo Riyadh waxa uu ahaa mid dadban, midkoodna ma uusan qaadin talaabo toos ah oo uu kan kale ku weerarayo marka laga reebo hal gantaal oo Yemen laga ganay, laguna riday Sucuudiga.
Meesha suurtagalka ay tahay in ay isaga hor tagaan ayaa ah badda gacanka Carabta, halkaas oo xuduud badda ah ay ka leeyihiin.